Mayelana nathi - Foshan Shunde Ruima Machinery Co., Ltd.
Foshan Shunde Ruima Imishini Co., Ltd.
RUima Imishini Co., Ltd. Yasungulwa ngo-2000, it has abasebenzi abangaphezu kuka-300, kuhlanganise 50 R & D ochwepheshe, abaphathi 10, 40 yokuthengisa abasebenzi futhi 20 emva-sales service. Indawo entsha yefektri engamamitha-skwele angama-35000 iyakhiwa, iRuima iyimishini yokubaza futhi yabona ibhizinisi lihlanganisa ucwaningo nentuthuko, ukuklama, ukukhiqiza nokuthengisa.
Ngokuya ngesimo sokukhiqiza nesitshalo samakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe, sinikeza izixazululo zokukhiqiza ukusika kwelogi, ukusika izinkuni eziyisikwele, ukusika onqenqemeni, ukuxebuka komphetho njalonjalo. Futhi ukuhlinzeka amakhasimende ngemishini yasendlini eyenziwe ngokwezifiso kanye nokucushwa kwamathuluzi nezixazululo zokusebenzisa, ezinenhloko yedolobha laseLunjiao, iShunde District, iFoshan City international Woodworking Machinery City okuyi-Exhibition enkulu kakhulu ye-Woodworking Machinery eChina.
Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-20 yokuqongelela, inkampani yathuthuka yaba i-vane embonini yohlobo lwepuleti, ukhuni oluqinile kanye namasaha wephrofayili ye-aluminium, futhi isebenze eduze namabhizinisi ahlukahlukene aziwayo. Imikhiqizo yayo ifaka phakathi: izindwani zesaha eziyindilinga, imimese yokusika, imimese yokuqopha, imimese evuthayo, izindwani ezincane, amasaya ebhande, amasaya ohlaka, njll. Isigaba semishini: imishini yohlaka lwesithombe, ungene emshinini wesarha omningi nePlank imigqa eminingi yokukhiqiza isaha, ithunyelwe eningizimu-mpumalanga I-Asia, Kuze kube manje, sinama-ejenti ayi-159 ezweni, imikhiqizo yethu ithunyelwa eMelika, e-Afrika nakwamanye amazwe.
Eminyakeni yamuva, siye ngempumelelo athuthukiswe idayimane isaha izindwani, okuyinto akuxhomekile ukungeniswa angaphandle, futhi ahlinzeke amakhasimende ngamadayimane isaha izindwani namathuluzi nge super izindleko ukusebenza, ubulukhuni ephakeme, ngaphezulu bafake ukumelana futhi ukuphila isikhathi eside.
Kusukela yasungulwa, Ruima Imishini ukunamathela "single isaha ubuhlakani, okwenza ku Ruima" injongo, ngokusekelwe izinga lomkhiqizo, inkonzo enhle ukholo ibhizinisi, ukuncela ehamba phambili ubuchwepheshe ukukhiqizwa emhlabeni, njalo ngcono inqubo ukukhiqizwa umkhiqizo, ngcono indlela futhi indlela yesevisi, izokwazi ukusiza ibhizinisi lakho liqale!
CNC Machine Amathuluzi, CNC Bits, IKhabinethi Yamathuluzi Wokhuni, Izinsimbi zomzila ze-CNC, Amathuluzi kaRobin Wood, Izinhlelo Zekhabhinethi Zamathuluzi Wokhuni,